Hay’adaha ka howl-gala Dalka oo lagu amray inay Isticmaalaan Bankiyada dalka | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Hay’adaha ka howl-gala Dalka oo lagu amray inay Isticmaalaan Bankiyada dalka
Wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay inay hay’addaha ka shaqeeyaa gudaha dalka ay sanadkii tagay kala hishiiyeen inay isticmaalaan bankiyada dalka lana rabo hada in lagula xisaabtamo dhaqan galinta hishiiskaasi sidoo kale lagu adkeeyo sida Soomaalida loogu xoojiyo inay isticmaalaan bankigayada dalka.
“Waa in lala xisaabtamaa Hay’addaha ka shaqeeya dalka halka ay mariyaan lacaga dalka ay soo galiyeen horeyna waan kala hishiinay sidaa dareedeed waa inaan xoojinaa dhaqan galinta hishiisyada”ayuu yiri Wasiir Jamaal.
Wasiir Jamaal waxa uu sheegay in kaliyada lacagaha dalka soo gali aysan laheyd Soomaaliyeed hase ahaatee ay jiraan hay’addo mashriic ka fuliya dalka sida lagu ogaaday lacag ka badan labo bilyan oo Doolarka Mareykanka ayaa soo gasha dalka sanadka kasta waana in la ogaado halka la mariyo iyo sida loo maareeyo .
“Lacago ka badana labo bilyan ayaa sanadkiiba soo gasha dalka marka waa in lala socdaa sida loo maareeyo iyo habraacyada loo maray iyadoo la dhaxmarinayo bankiga dalka ayuu yiri wasiir Jamaal Maxamed Xasan.
Wasiirka waxaa kaloo sheegay haddii aan la xisaabin lacagahaan iyo waxyaabaha ku xeeran waxaa laga yaaba in dhaqaale badan uu ka maqnaado nidaamka dowladda iyo shruucaha lagu hago dalka .
Mar hadii aan kun darno xisaabta inagoo ku dhaqeyno sharuucda dalka waxa ay suura galineysaa in maalgashiyaasha ay kusoo dhiiradaan dalka taasne ay suuragalineyso hormaro la taaban karo.
“Waxaan Sameynay Bar lagula socdo lacagaha doolarka ee dalka la soo galiyo halka lagu isticmaalo iyo goobaha ay yaalaan waxaana ka mid tahay qorsha ay diyaarisay wasaaradda qorsheynta sidoo kale qof kasto waxaa uu kala socon karaan Page-ka wasaaradda
Previous articleHay’adda socdaalka oo qabatay shabakado ka shaqayanyey socdaalka sharci darrada ah